Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Eyoyikisayo? I-Air India A320 indiza esuka eDelhi ukuya eKabul
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Air India A320 isuka eKabul eDelhi
I-Air India Flight 243 ngeCawa, eqhutywa neAirbus 320, yayikwinqwelomoya eyayicwangcisiwe ukusuka eDelhi, eIndiya, ukuya kwikomkhulu laseAfghan iKabul. Ngelixa indiza yelungu le-Star Alliance yayisendleleni kwaye isondela, iKabul yafunyanwa ngabalwi beTaliban.
“Indawo yomoya e-Afghanistan ibhengeziwe ivaliwe, ngoko ke akukho nqwelo moya inokusebenza apho. Inqwelomoya ebalekele eKabul nayo ayinakuhamba, ”utshilo isithethi seAir India.
Izolo, inqwelomoya iAir India Flight 243 isuka eDelhi isiya eKabul ngo-8: 50 ekuseni ixesha lase-India lalibambezeleka kancinci xa lishiya abakhweli abangama-40 base-Afghan kwi-Airbus A320.
Yiyure-2, inqwelo moya yemizuzu emi-5 ukuya eAfghanistan engummelwane. Emva kokuwela umda kwi-AI 243 nge-15 ka-Agasti kwaye indlela ekulindeleke ukuba iqale, inqwelomoya ye-Air India yayalelwa ukuba ibambe kwaye ijikeleze kwi-16,000 yeenyawo ukuphakama eminye imizuzu engama-90 ngaphambi kokuba ivunyelwe ukuba iwele.
Ukufika ngamanye amaxesha kunokulibaziseka ngenxa yokunxibelelana komoya okungafanelekanga kwindawo yomoya eAfghanistan.
Njengoko amaIndiya ayebhiyozela uSuku lwe-Independence ngeCawa, nge-15 ka-Agasti, iTaliban yayinjalo ukudala isiphithiphithi kunye noloyiko ekuthatheni iKabul, ikomkhulu lase-Afghanistan.
Abantu baseKabul basala benoloyiko njengoko iindaba zaqengqayo zathi iTaliban yayijikeleze isixeko ngalo mini. Urhulumente wase-Afghanistan wayebaleka ilizwe, kwaye isixeko ngokwaso sasisiphithiphithi.
Air India 243, a Star Alliance Inqwelomoya eqhutywa yiAir India, yayithwele abasebenzi abathandathu kunye nabakhweli abangama-6 ukusuka eDelhi ukuya eKabul bengazi ukuba bazakuvunyelwa na ukuhlala nasemva kokuba befike kwindawo yomoya eKabul. Inqwelomoya iyalelwe ukuba ijikeleze isibhakabhaka ngaphandle kwesizathu.
Kwimizuzu engama-90 elandelayo, i-Air India yajikeleza isibhakabhaka kumphakamo weenyawo ezili-16,000. Inqwelomoya yeAir India yayihambile nepetroli eyongezelelweyo. Umqhubi wenqwelomoya onamava wayesazi ukuba kunokubakho ukulibaziseka kokufika ngenxa yokunxibelelana ngenqwelomoya okungafanelekanga e-Kabul airspace ngamanye amaxesha.
Njengeenqwelo moya zaseIndiya, zimbini nangaphezulu iinqwelomoya ezazibhabha ngaphandle kwemvume yokuhlala emhlabeni. Ukongeza kwiTaliban ethatha isixeko, ukusebenza ngenqwelomoya ngaphezulu kweKabul ngumceli mngeni othile.
Isikhululo seenqwelomoya iKabul sihlala "sixakekile kwaye siyadinisa" abaqhubi beenqwelomoya bathi. Ngeli xesha lonyaka, ukubhabha esixekweni kubeka ucelomngeni olongezelelekileyo: imimoya inamandla kwaye inamandla.
Iinqwelo-moya ezihleli ezili-160 zavavanywa nguKapteni Aditya Chopra.
Imvume ekugqibeleni yanikwa nge-3: 30 emva kwemini ixesha lokuba indiza yehle.
Abakhweli kunye nabasebenzi babengazi, nangona kunjalo, ukuba imeko yezopolitiko eKabul yayiba mandundu. Nokuba emva kokufika kwenqwelomoya, akukho namnye kubasebenzi oshiye i-cockpit, exhaphake eKabul. Emva kokulinda malunga neyure enesiqingatha, inqwelomoya ye-India India yakhwela abakhweli abali-129 yaza yaya eDelhi kwakhona.
Inqwelomoya yayiphethe abameli boonozakuzaku baseIndiya, amagosa aseburhulumenteni eAfghan, ubuncinci amalungu ePalamente amabini eAfghan, kunye nomcebisi omkhulu kulowo wayesakuba nguMongameli Ashraf Ghani.
Umgibeli wathi unokubona abantu kwisikhululo senqwelomoya saseKabul bedakumbile bezama ukuhamba.
NgoMvulo, i-Air India yayinenqwelomoya ehleliweyo yeKabul esuka eDelhi nge-8: 50 kusasa. Okokuqala kwalibaziseka ukuya kwi-12: 50 pm kwaye emva koko yamiswa emva kokuvalwa kwendawo yomoya e-Afghanistan emva kwe-NOTAM-Isaziso ku-Airmen, isaziso esisemthethweni esineenkcukacha malunga nokusebenza kwendiza, sikhutshiwe.
Abanye abakhweli kwinqwelo-moya babalisa ukuba “bayayiva ingxwabangxwaba esemhlabeni,” kodwa kwakungacaci ukuba yayingantoni na.
Kwakukho amajoni ebaleka kwiindlela zeenqwelo-moya. Kwakukho nokugquma kwemisebenzi yomoya: I-C-17 Globemaster yezothutho lomkhosi wenqwelomoya kunye neenqwelomoya zeChinook zaziphaphazela zingena zingena.
Kwaye babona iinqwelomoya zasePakistan (PIA) kunye neQatar Airways zipakishwe kwitela.
Oku, mhlawumbi, yenye yezona mifanekiso zibuhlungu ndizibonileyo #Afghanistani. Abantu abaphelelwe lithemba nabalahliweyo. Akukho arhente zoncedo, akukho UN, akukho rhulumente. Akukho nto. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR
-Nicola Careem (@NicolaCareem) Agasti 16, 2021